Welfare group helps South African township dogs | UTSanDiego.comJune 3, 2015Today's PaperWeather 63º FTrafficSurfWebcamsSubscribe/LoginNewsLocal TopicsCommunitiesNorth CountyNationWorldWatchdogObituariesDroughtClose ␡NewsStadium talks open, Carson still loomsBusinessBiotechEconomyEnergyFinanceReal Estate & GrowthRetailTechnologyTourismClose␡BusinessStadium talks open, Carson still loomsVideoNewsSportsBusinessEntertainmentFeaturesWatchdogMilitaryMoreClose ␡MilitaryWomen in CombatSpecial report:San Diego’s fleetU-T in AfghanistanWWIIClose ␡MilitaryVinson crew rescues elderly boaterDeals & OffersDaily DealsContestsNewspaper AdsEventsGuidesSD Best PollStoreClose ␡U-T OffersThree Truewhite on-the-go'sReal EstateHomes for SaleNew HomesRentalsOpen HomesU-T Certified ServicesMortgagesCommunitiesOpen House ShowClose ␡RealEstateJim Carmichael joins Keller Williams El Cajon officeSportsChargers / NFLPadres / MLBAztecsTorerosChargers StadiumSoccerHigh School / PrepsHorse RacingClose ␡sportsKennedy, Padres rebound to beat MetsEntertainmentEventsDiscoverSDDining & DrinkingMusicLifestylePerforming ArtsArts & CultureThings To DoClose ␡Entertainment'Entourage': Big-screen bromanceMarketConnectHealthLifestyleHome ImprovementReal EstateEntertainmentBusinessEnergyTechnologyClose ␡MarketConnectHelping your garden grow: Choosing a palm treeOpinionEditorialsCommentaryLetters to the EditorSteve BreenSteve Breen Caption ContestClose ␡OpinionFor ‘Death with Dignity Act’ in CaliforniaClassifiedsJobsMerchandiseLegalPetsPlace an AdObituariesClose ␡CarsSell Your CarBuy a CarResearch CarsFinanceFind a DealerClose ␡⌂NewsWelfare group helps South African township dogsBy SCHALK VAN ZUYDAM, Associated Press6:32 a.m.Feb. 28, 2012⎙ Print Comments
/ APReddit✉-CommentsIn this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, a dog is caged at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)— APShare PhotoReddit✉
/ APIn this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, an unidentified pet owner leaves the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa ater his dog received treatment The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)— APShare PhotoReddit✉
/ APIn this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, an unidentified dog owner carries his pet to the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)— APShare PhotoReddit✉
/ APIn this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, a dog is operated on by veterinarian Brain Bergman at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)— APShare PhotoReddit✉
/ APIn this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, a dog is examined by British volunteer veterinarian Gemma Driscoll, right, at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)— APShare PhotoReddit✉
/ APIn this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, an unidentified pet owner offloads his dog at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)— APShare PhotoReddit✉
/ APIn this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, a dog awaits treatment at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)— APShare PhotoReddit✉
/ APIn this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, an anesthetized dog undergoes surgery at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)— APShare PhotoReddit✉
/ APIn this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, a dog is held in a cage while awaiting surgery at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)— APShare PhotoReddit✉
/ APIn this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, a dog cares for it's puppies in a cage at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)— APShare PhotoReddit✉
/ APIn this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, a dog is carried by a worker to undergo surgery at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)— APShare PhotoReddit✉
/ APCAPE TOWN, South Africa  An animal welfare group is trying to help dog lovers in an impoverished South African township better care for their pets.